ဦးဆောင်ဂိုးတွေကို မထိန်းထားနိုင်တာကြောင့် အိမ်ကွင်းမှာ အမှတ်လျော့သွားခဲ့ရတဲ့ အာဆင်နယ် ( အာဆင်နယ် ၂ ​- ၂ ခရစ္စတယ်ပဲလေစ့် Match Review ) - SPORTS MYANMAR
ဦးဆောင်ဂိုးတွေကို မထိန်းထားနိုင်တာကြောင့် အိမ်ကွင်းမှာ အမှတ်လျော့သွားခဲ့ရတဲ့ အာဆင်နယ် ( အာဆင်နယ် ၂ ​- ၂ ခရစ္စတယ်ပဲလေစ့် Match Review )
Super Sunday ရဲ့ လန်ဒန် ဒါဘီ ပွဲစဉ်မှာတော့ အိမ်ရှင် အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ပွဲအစ ၁၀ မိနစ်မှာ ကတည်းက နှစ်ဂိုးပြတ် ဦးဆောင် နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ချေပဂိုးတွေ ပြန်လည် ခွင့်ပြု ခဲ့ရကာ အိမ်ကွင်းမှာ သရေ တစ်မှတ် နဲ့ပဲ ကျေနပ် ခဲ့ရပါတယ် ။ ဒီနေ့ပွဲ သရေ ရလဒ်ကြောင့် အာဆင်နယ် အသင်းဟာ အဆင့် လေး နေရာက ချဲလ်ဆီး အသင်းနဲ့ ၄ မှတ် အထိ ကွာဟ သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်း နည်းပြ အမ်မရီ ဟာ ၄-၂-၃-၁ ကစားကွက် နဲ့ ခင်းကျင်း ပွဲထွက် လာခဲ့ပြီး တီယာနေး ကို ပထမဆုံး အကြိမ် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ပွဲထွက် အသုံးပြု ခဲ့ပါတယ် ။ ကျန်နောက်တန်း ကစားသမားတွေကတော့ မြင်တွေ့နေကြ ချိန်ဘာ၊ဆိုကရက်တစ်၊လူးဝဇ် တို့ပဲ ဖြစ်ပြီး ဂိုးသမား ကတော့ လီနို နဲ့ ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ် ။
ကွင်းလယ်မှာတော့ ရှေ့ပွဲတွေမှာ အတွဲအဖက် မမိတဲ့ ရှာကာ နဲ့ ဂွမ်ဒူဇီ တို့ကိုပဲ ဆက်လက် တွဲပေးခဲ့ပြီး ကွင်းလယ်နဲ့ တိုက်စစ်ကို ချိတ်ဆက် ပေးမယ့် ကစားသမား အဖြစ် စီဘယ်လောစ့်ကို အသုံးပြု ခဲ့ပါတယ် ။ တိုက်စစ်မှာတော့ အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး အစုအဖွဲ့ ဖြစ်တဲ့ နီကိုလပ်စ် ပေပေ၊လာကာဇက်၊အူဘာမီယန်း တို့ တစ်ပြိုင်နက် ပွဲထွက် လာခဲ့ပါတယ် ။
Goal !!! ပွဲချိန် ၆ မိနစ်မှာတော့ အိမ်ရှင် အာဆင်နယ် အသင်း ဦးဆောင်ဂိုး စတင် ရရှိ သွားခဲ့ပြီး ထောင့်ကန်ဘောကနေ တစ်ဆင့် ရှာကာ ခေါင်းတိုက် ချပေးတဲ့ ဘောလုံးကို ဆိုကရက်တစ် က ညာခြေ နဲ့ ကန် သွင်း ယူ သွား ခဲ့ တာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။
Goal !!! ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပဲ အာဆင်နယ် အသင်း ဒုတိယ ဦးဆောင်ဂိုး ထပ်မံ ရရှိ သွားခဲ့ပြီး ထောင့်ကန်ဘောကနေပဲ ကျလာတဲ့ ဘောလုံးကို လူကပ် ခံထားရခြင်း မရှိတဲ့ ဒေးဗစ် လူးဝဇ် က အနီးကပ် ပိတ်သွင်းယူ သွားခဲ့တာပါ ။ မိနစ် အနည်းငယ် အကြာမှာ တီယာနေး ရဲ့ ဖြတ်တင် ပေးပို့မှုကို လာကာဇက် တစ်ချက် ထိန်းပြီး ကန်သွင်းခဲ့ပေမယ့် ဟန်နက်ဆေး လက်စွမ်းပြ ကာကွယ် သွားခဲ့ပါတယ် ။
ပွဲချိန် ၂၉ မိနစ်မှာတော့ ဒိုင်လူကြီး မာတင် အက်ကင်ဆန်ဟာ ဂိုးဧရိယာထဲမှာ ဟန်ဆောင် ဒိုင်ဗင် ပစ်တယ်ဆိုပြီး ဇာဟာ ကို အဝါကဒ် ပြသ သတိပေး ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒိုင်လူကြီး အက်ကင်ဆန် ဟာ VAR အဆုံးအဖြတ် ရယူခဲ့ပြီး ဇာဟာ ရဲ့ အဝါကဒ်ကို ပြန်လည် ပယ်ဖျက် ပေးခဲ့သလို ပဲလေစ့်ကိုလည်း ပင်နယ်တီ ကန်ခွင့် ပေးခဲ့ပါတယ် ။ အဆိုပါ ပင်နယ်တီကို ကွင်းလယ်လူ မီလိုဗီဂျိုဗစ် က အမှားအယွင်း မရှိ ကန်သွင်း နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
ဒီနေ့ပွဲမှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ အကောင်းဆုံး ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှု ဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ် အသင်း ရဲ့ စံချိန်တင် ပြောင်းရွှေ့ကြေးရှင် ပေပေ နဲ့ အာဆင်နယ် အသင်းကို ရောက်ဖို့ နီးစပ်ခဲ့တဲ့ ဇာဟာ တို့ နှစ်ဦးဟာ ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့ အခါမျိုးမှာ တစ်နိုင်ငံတည်းသားချင်း ဖြစ်ပေမယ့် လုံးဝ မညှာဘဲ ရေကုန်ရေခမ်း ကြိုးစားပမ်းစား ဘောလုံး လိုက်လုကြတာကို တွေ့မြင် ခဲ့ရပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ပွဲကို အကောင်းဆုံး စတင် နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ပွဲချိန် ကြာလာတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ပဲလေစ့် အသင်းကတောင် ဘောလုံး ပေးပို့မှုတွေ ပိုမို လုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့တာကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ် ။ ပထမပိုင်းမှာတော့ အာဆင်နယ် အသင်း နဲ့ ပဲလေစ့် အသင်းရဲ့ ဂိုးပေါက် တည့်မတ်မှု ၃ ကြိမ်စီ ရှိခဲ့ပါတယ် ။
ဒုတိယပိုင်း စပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ပဲလေစ့် အသင်းဟာ နောက်ထပ် ချေပဂိုး တစ်ဂိုး ထပ်မံ ရရှိ သွားခဲ့ပြီး မက်အာသာ ရဲ့ ဖြတ်တင် ပေးပို့မှုကို ဂျော်ဒန် အယူးက ဂိုးတိုင်နဲ့ အနီးကပ် အနေအထား ကနေ ခေါင်းတိုက် ပိတ် သွင်း ခဲ့ တာ ပါ ။
ပွဲချိန် ၆၁ မိနစ်မှာတော့ အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ပထမဆုံး အကြိမ် လူစားလဲမှု အဖြစ် အသင်း ခေါင်းဆောင် ရှာကာ နေရာမှာ ဆာကာ ကို ထည့်သွင်း ကစားခဲ့ပါတယ် ။ ရှာကာ ဟာ ကွင်းထဲမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ လှောင်ပြောင် အော်ဟစ်မှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့် အရန်ခုံမှာတောင် မထိုင်တော့ဘဲ အဝတ်လဲခန်း အတွင်းကို တန်းဝင် သွားခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်း ဟာ တည်ကန်ဘောတွေ ၊ ဖြတ်တင်ဘောတွေ ကနေပဲ ဂိုးရယူနိုင်ဖို့ ကြိုးစား နေခဲ့ပြီး တိုက်စစ်မှူးတွေကို အခွင့်အရေး ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် ကစားသမား မျိုး ပျောက်ဆုံး နေခဲ့ပါတယ် ။ စီဘယ်လောစ့် က ကစားသမားကောင်း တစ်ဦး ဖြစ်ပေမယ့် final ball ပေးပို့မှုတွေမှာတော့ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတာကိုလည်း တွေ့မြင် ခဲ့ရပါတယ် ။
ပွဲချိန် ၈၂ မိနစ်မှာတော့ အာဆင်နယ် အသင်းအတွက် ဆိုကရက်တစ်က ဦးဆောင်ဂိုး ပြန်လည် သွင်းယူ ပေးခဲ့ပေမယ့် ဒိုင်လူကြီး မာတင် အက်ကင်ဆန် က VAR ပြန်ကြည့်ပြီး ဂိုးအဖြစ်ကနေ ပြန်လည် ပယ်ဖျက် ခဲ့ပြန်ပါတယ် ။ အာဆင်နယ် အသင်းအတွက်တော့ VAR နဲ့ ကံမစပ်ဘူးလို့ပဲ ဆိုရမှာပါ ။
ပွဲပြီးခါနီးမှာ လာကာဇက် ရဲ့ ပေးပို့မှုကနေ ဒေးဗစ် လူးဝဇ် ဘယ်ခြေ နဲ့ ကန်သွင်းခဲ့ပေမယ့် ဂိုးသမား ဟန်နက်ဆေး လက်စွမ်းပြ ပုတ်ထုတ် သွားခဲ့ပါတယ် ။ဒီနေ့ပွဲမှာလည်း အာဆင်နယ် အသင်း ရဲ့ ကစားပုံဟာ အားရစရာ အနေအထားမှာ မရှိခဲ့သလို VAR ကလည်း အာဆင်နယ်အသင်းဘက်ကို မျက်နှာသာ မပေးခဲ့ပါဘူး ။ ကြားရက်မှာတော့ အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ကာရာဘောင်းဖလား ပြိုင်ပွဲမှာ လီဗာပူး ကို အဝေးကွင်းမှာ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင် ကစားရမှာပါ ။